Isamsung isebenza kwimisonto emibini yokusonga yoyilo | I-Androidsis
Isamsung isebenza kwimisonto emibini yokusonga uyilo
Ngokwezikhombisi zamva nje, Isiboniso seSamsung sisebenza kwimiboniso emibini yokusonga eneenguqulelo eziyi-8″ kunye ne-13 ″. Iiphaneli kulindeleke ukuba zilungele kulo nyaka, kodwa akucaci ukuba izixhobo zokuqala ukuzisebenzisa ziya kuvela nini.
Ngokwipapasho laseKorea le I Bell, Uyilo ezimbini ezahlukeneyo ziyaphuhliswa: uhlobo 'G' kunye nohlobo 'S'. Iileta zenzelwe ukubonisa ubume, kodwa imifanekiso engezantsi kufuneka iyenze icace.
Ngenxa yesandi sayo, isikrini esine-intshi esi-8 siya kuba luhlobo 'G', ngelixa isikrini se-intshi ezili-13 siyakuba luhlobo 'S'. Zombini ziya kukhuphisana nokuthandwa kwe-iPad mini kunye nePad Pro, ngokwahlukeneyo, ezinezikrini ezilinganayo.
Uhlobo lwesibini 'G' lokusonga isikrini
Uhlobo lwesibini 'S' lokusonga isikrini
Uhlobo lwe-'G 'lwesikrini luyakushiya isikrini esisebenzayo ngasemva xa sisongelwe. Uhlobo lwe-'S ', okwangoku, luya kuba nescreen ngaphambili kuphela.
Ngokunokwenzeka baya kuba sisisombululo se-FullHD, njengaleyo ye- Galaxy Fold. Nangona kunjalo, kuba baya kubonisa omnye umxholo, asinakuqinisekisa ngale nto okanye ezinye iinkcukacha ... ubuncinci hayi ngeli xesha. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba kwiintsuku okanye kwiiveki ezizayo siyokwazi ngakumbi ngezi.
Ngakolunye uhlangothi, izixhobo eziza kukhanya ziya kuba yinto entle, njengoko kukhankanyiwe i-Galaxy Fold yenkampani okanye ukusonga kwakhona Umtshato X IHuawei, ethe, ngokoluvo oluninzi, yagqwesa kuyilo nakwamanye amacandelo. Ukongeza, baya kuxhotyiswa ngezinto zakutshanje, ezinje nge Snapdragon 855 okanye ezichaphazelekayo Exynos 9820 yenkampani, kunye nememori ye-RAM engekho ngaphantsi kwe-8 GB kunye nendawo yokugcina engekho ngaphantsi kwe-128 GB.
Ngokufanayo, siyaphinda siyayigxininisa loo nto eyona "imfutshane" esinayo ukuza kuthi ga ngoku yile mifanekiso. Yonke enye into iya kuba yintelekelelo ngakumbi okanye amarhe, de zenziwe zibe semthethweni kwaye ziqinisekiswe yinkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Isamsung isebenza kwimisonto emibini yokusonga uyilo